Ny mampiavaka an’i LeRoy Clarke, mpanakanto kintan’i Trinidad & Tobago maty tamin’ity herinandro ity · Global Voices teny Malagasy
'Izy dia fiainana feno fahatsiarovantena ho azy manokana'
Voadika ny 31 Jolay 2021 2:17 GMT
“Prophetic Flaming Forest” nataon'i LeRoy Clarke, 2003. Sary natolotry ny The Lloyd Best Institute of the Caribbean, nahazoana alàlana ny fampiasàna azy.
Nosoratan'i Sunity Maharaj
Fanamarihan'ny mpamoaka lahatsoratra: Ny marainan'ny 27 Jolay, andron'ny faha-31 taona katroky ny niatrehan'i Trinidad & Tobago andrana ho fanonganam-panjakana, karazana famoizana hafa mihitsy no niainan'ny firenena, tamin'ny nahafatesan'ilay mpanakanto nahay sy nalaza LeRoy Clarke. 82 taona izy izao lasa izao.
Fantatra voalohany indrindra amin'ireo hosodokony marevaka sy be pitsony, Clarke, nohosorana ho “Ny Sefo” ( zokiolona iray avy amin'ny vondrompiarahamonina Orisha izy), dia poeta fantadaza ihany koa, namoaka boky marobe nandritra ireo taona maro niasàny.
Ivon'ny aingam-panahiny ny vina lalina sy feno fitiavana amin'izay rehetra azon'i Karaiba atolotra—vina iray nifàka lalina tao anatin'ny fahalalàny midadasika ny tantara sy ny kolontsain'ilay faritra, natosiky ny fikatsahany tsy misy farany ny lafatra. Ny asany dia ara-panahy, fihetsehampo, voadinika ary mpisava làlana, notarihan'ny faniriana iray avy ao anaty te-hahafantatra, hahatakatra ary hametraka fifandraisana, fa tsy faniriana ivelany fotsiny mba hahazo laza, na dia tratrany koa aza izany, ary araka ny filazany azy manokana.
Tsara antoka ny lova navelany, ary ny feo feno fahefana nananan'i Clarke dia hita hatrany anatin'ny fanambaràna nataon'ny fianakaviany nilazàna ny fahafatesany, izay naomboka tamin'ny hoe, “Chief Ifa’ Oje’ Won Yomi Abiodun, maniry ny hanambara fa lasa namonjy ny fanjakan'ireo razambe izy.”
Pikantsarin'ilay mpanakanto malaza, LeRoy Clarke, nalaina tao amin'ny lahatsary YouTube-n'ny Studio Archives Ep. 6 LeRoy Clarke,’ an'ny etv Island.
Ilay mpanao gazety ao Trinidad & Tobago, Sunity Maharaj, nanoratra momba ny fandraisana anjarany nampitolagaga teo amin'ny tontolon'ny zavakanto, tao anaty tsongan-dahatsoratra iray nampiasain'i Clarke ho toy ny sava-ranonando tamin'ny roa amin'ireo boky nosoratany, PARables of our Joyless Days sy Eye Haiti…Cries…Everywhere. Asehon'io ny tena mampiavaka an'i LeRoy Clarke. Nanome alàlana tam-pitiavana anay i Maharaj mba hamerenana mamoaka izany etoana:
Ny kanton'i LeRoy Clarke
Nisy i LeRoy Clarke satria sahy nijoro ho izy.
Im-betsaka nahazo famindrampo noho ny fikirizany tsy nahalala vizana mba hiaina sy hisy ilay zaza natsangan'i Yemanja [Orisha Renin'ny Ranomasimbe sy ireo Orishas rehetra] mba hamonjy avy amin'ny fasana tambanin'ny rano. Aty amin'ny faha-valopolo taonany mahery, ary miaraka amin'ny fanahiny mirotsaka tanteraka amin'ny fanoratana lahatsoratra fahatsiarovana, tsy mbola velona tahàka izany nandritra ny androm-piainany i LeRoy Clarke, ary tsy hifamatopatotra ireo kofehiny nefa vao manomboka mipongatra ny lasitrana karipetra iray tokamiavaka.
Izy dia fiainana feno fahatsiarovantena ho azy manokana. Samy amin'ny toerany avy ireo rantsan-tongotra napetrany, ny rantsan-tànana natsangany, ny teny tsirairay notononiny, ary voadinika tsara toy ireny teboka kely voapetraka tsara eny anelanelan'ny andalana roa voasoritra tsara ao anaty hosodokony ireny.
LeRoy Clarke voahodidin'ireo asany sy ireo mpankafy azy nandritra ny fampirantiana “The Art of Obeah” nataony tamin'ny 2019. Sary natolotry ny “The Lloyd Best Institute of the Caribbean” tam-pitiavana, fampiasàna nahazoana alàlana.
Ny kanto maha-LeRoy Clarke dia taranja iray, novolavolain'ilay mpanakanto iray naka aingampanahy no sady napararetran'ny fiarahamonina izay nanorotoro ny zavakantony tao anatin'ny fisiana. Izy no izy dia noho ny maha-isika antsika. Ilay fikaliany fatratra, ireo sary amin'ny misy antsipirihany faran'izay bitika, ireo fihetsehampony tsy voapaika ary ny fanaovany an-tendro mafy hatoka no valinteny omeny ny fiarahamonina izay izay hitany ho tsy misy dikany loatra, tsy voafaritra mazava loatra, mahazo aina loatra miaina miaraka amin'ny hadalàna ary malaky loatra manao farahehy amin'ny fanaikena lembenana iray tsy nifanarahana. Tsy azony ny ainy manoloana ny fifampihatakatahantsika ary laviny ny safidintsika hiaina anaty lavenona. Ao anatin'ny fikatsaham-pahamarinan'ilay mpanakanto ao anatiny, ny fahazavan'ny azo antoka no zavatra katsahiny. Tao anatin'ny “Eye Haiti: Cries Everywhere”, nahita làlana izy nony farany hahatongavana any amin'ilay tena fahazavana tsy isalasalàna ho an'ny tontolo iray narafitra tamin'ny loko mainty sy fotsy.
Amin'ny lafiny rehetra, dia ireo asa famoronany sy ny asakantony ihany no i LeRoy Clarke. Nandrafitra ny fomba firesaka noforoniny ho azy manokana izy, namorona filôzôfia ho azy manokana momba ny zavakanto, nanefy ny endriky ny sariny sy nametraka ireo fitsipika ho an'ny tranony manokana. Na ho ratsy na ho soa, tsy mamaly na iza na iza izy, tsy milefitra ihany koa ka hanary ny zo hanome lanja ny tenany sy ny asany. Amin'ny maha-mpifehy ny fanahiny azy, notazoniny ny zo hametra izy tenany ny vidin-javatra rehefa manao fifanakalozana teo amin'ny fiainany.
Anaty tontolo iray nobeazina hitantana ny fahasamihafàna sy hifehy ny fankahàrana ary ahitàna ny fanarahana fenitra sy ny tsy fandraisana andraikitra miara-monina ambany tafo iray, hatezerana miharo lanonana misy tsy fetezany i LeRoy Clarke, no sady fankahàrana voafono anaty fombafomba.
Na afaka ny hanokatra ny fanahintsika aza isika, mila fotoana izany, voalohany, hanakàrana ary avy eo hanekena ireo hafahafa maha-izy an'i LeRoy Clarke. Fa mandra-piandry an'izay, ndao izy hankafizina.
Ny mpanao gazety, Sunity Maharaj, dia talen'ny The Lloyd Best Institute of the Caribbean, fikambanana iray tsy mikatsaka tombony ara-bola miorina ao Trinidad & Tobago “manokan-tena ho amin'ny famoahana izay tsara azon'i Karaiba atolotra.”